Waftigii Cabdulahi Yusuf oo saaka gaaray Bosaaso
BOSAASO, 22 Nov 2002 (MOL) -Wafti uu hogaaminayo Madaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland Cabdulahi Yusuf ayaa saaka subaxnimadii ka degay garoonka dayuuradaha ee Bosaaso. Waftiga oo shalay ka soo duulay magaalada Eldoret ee uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta Somaliyeed ayaa waxay isla shalay soo gaareen Magaalada Galkacyo oo illaa shalay ay ku nasteen. wararka ka imaanaya magaalada Bosaaso ayaa sheegaya in waftiga madaxweynaha si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Bosaaso iyadoo ay garoonka iyo wadooyinkaba ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. ku simaha Madaxweynaha Puntland Mudane Axmed Maxamed Ceegaag iyo wafti uu hogaaminayo ayaa u soo galbiyay waftiga madaxweynaha dhinaca qasriga madaxtooyada Bosaaso.
wali lama shaacin sababta dhabta ah ee booqashada Madaxweynaha iyadoo uu hadda dhexda uga jiray shirkii dib u heshiisiinta oo maraya meel aad xasaasi u ah ka dib markii shirka ay afduubteen dagaal oogayaasha magaalada Muqdishu oo raba inay gabi ahaanba fashiliyaan shirka ilaa 3 asbuucna shirku u xayiraa daraadood. waxaa la saadaallinayaa in waftiga madaxweynhu dib ugu noqdo magaalada ELdoret halkaas oo haatan hawsha Puntland uu sii wado Madaxweyne ku xigeenka Mudane Maxamed Cabdi Xaashi. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in booqashada Madaxweynuhu la xiriirto xalinta dhibaato ay keentay lacag been abuur ah oo poliska Puntland ku qabteen magaalada Bosaaso. arintaasna loo xiray masuuliyiin ka tirsan Dawlada Puntland taasna keentay isqabqabsi maamulka dhexdiisa. waxaa la filayaa in lacagtaas oo qatar ku ah dhaqaalaha wadanka dab la qabadsiin doono inta aysan dhaawac sicir barar u geysan nolol maalmeedka bulshada danyarta ah.
Shirkii Eldoret oo wali jaahwareer ku jira.
ELDORET, 22 Nov 2002 (MOL) -Wararka ka imaanaya madasha shirka dib u heshiisiinta Somalida ee ka socda magaalada Eldoret ayaa sheegaya in wali shirku uusan samayn wax horumar ah tan iyo maalintii daraad ee gudiga qabanqaabada IGAD ay wax ka badaleen habkii qaysiga ergada ka qayb galaysay shirka ka dib markii ay u badaleen qaabkii shirkii Carta oo kale oo lagu saleeyay hab qabiil. gudiga qabanqaabada ayaa waxay raali galinayeen qabqablayaasha dagaalka qaarkood oo diiday ergadii loo qoondeeyay. qabqable dagaal Qanyare iyo Caato ayaa waxay shirku ku fureen carqalad iyo xujooyin aan dhamaanayn oo iyagu uga dan lahaayeen inay is hortaagaan shirka. labada qabqable ayaa ku andacooday in lagu yareeyay ergada ayna rabaan in hab qabiil in wax lagu qaybsado.
kooxdii ay sameeyeen Qanyare iyo Caato oo loogu magacdaray G8 oo aan awood siyaasdeed ku lahayn Somaliya ayaa hadda la sheegay inay kala furfurmeen. Mawliid macaane, Abdirizaq Bixi iyo Barre Hiiraale ayaa la sheegay inay iyagu hadda ku qanceen sida IGAD wax u qaybisay. Qanyare iyo Caato oo arintaas filan waa ku noqotay ayaa hadda qaban qaabinaya urur kale oo ay rabaan inay ku soo jiitaan hogaamiyaasha Muqdishu qaarkood iyagoo ka dhaadhicinaya inay soo dhicinayaan xaqa beesha Hawiye. hadday ku guulaystaan koox kale oo ay uga gudbaan caqabada asbuucaas ayaa haddana la saadaalin karin waxa ay gudiga qabanqaabadu ka yeeli doonaan is rogroga iyo laba wajiyeynta dagaal oogayaasha.
Beelaha ayaa iyaguna illaa hadda ku mashquulsan qaysiga ergada. arintaas oo marnaba aan sahlanayn oo qabiil waliba isku dayayo sad bursi taas oo shirka gadaal u sii dhigi doonta ahna sababta markii horeba loo diidanaa in ergada lagu saleeyo hab qabiil oo Somaliya dhigay meesha aay hadda taal.
Allaha naxariistii Janno ha siiyee Dr. Raajis oo ahaa nin waayeel ah oo mumin ah waxaan Allaha awoodda leh uga baryaynaa inuu Jannadiisa Fardoowsa ka waraabiyo, Dembi dhaaf iyo xasanaad uu ku waarana guddoonsiiyo, Aamiin, Aamiin, Aamiin.
Illaahay ha u naxariisto Marxuumka eheladiisana Samir iyo Iimaan (Bahda Mudugonline.com)